डेढ वर्षअघिको कुरा हो । पहाड चढ्न गएको बेला पेटको कुनै भागबाट रगत लिकेज (रिसाब) भइरहेको अनुभव भयो । अस्पतालमा जाँच गर्दा हेमोग्लोबिनको मात्र ७ मा झरेको देखियो । डायग्नोसिसमा कोलोन (ठूलो आन्द्रा) क्यान्सरको शुरुको अवस्था देखियो
डा. लता बज्राचार्य स्त्री रोग तथा प्रशुति विधामा राम्रो अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा उहाँको ४० वर्षदेखिको अनुभव छ । अहिले डा. बज्राचार्य बसुन्धरास्थित चिरायु नेशनल हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ । यहाँ उहाँलाई बिहान ९ बजेदेखि
जन्मेको दुई वर्षसम्म तन्दुरुस्त रहेको नाति तीन वर्षपछि डोरीमा बाँधेर राख्नुपर्ला भनेर कञ्चनपुर, शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ अमरपुरका ६० वर्षीय हिरादेवी सुनारले सपनामा पनि चिताउनुभएको थिएन । जन्मिँदादेखि दुई वर्षको हँुदासम्म मोटो नै थियो । बोल्न खोज्थ्यो । हाँस्थ्यो